100 Feektarad casri ah oo bilaash ah | Kaliya Hal Abuurista Internetka | Abuurista khadka tooska ah
Maanta waxaan idiin soo wadnaa war aad u wanaagsan. Saaxiibbadeen oo ka Freepik, degel aad u dhameystiran oo ah ilo bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha, waxay go'aansadeen inay ku siiyaan xirmo khafiifayaal gaar ah oo loo yaqaan 'calligraphic vectors' oo aan lagu faafin doonin degel internet kale ah.
Xirmooyinka aan ka hadlaynaa waxay ka kooban yihiin, wax intaa ka badan iyo wax ka yar toona ma jiraan 100 dulinka. Ku habboon inaad u isticmaasho kala sooc u dhexeeya cutubyada, haddii aad rabto inaad taabasho suugaaneed siiso booskaaga, ama aad dhowr meel isugu dhigto oo aad u rogto looxyo aad u baroque ah oo qaybahaaga ah, adigoo samaynaya nooc badhan. Iyo, dabcan, waxaad sidoo kale ku isticmaali kartaa iyaga shaxankaas ugu dhow goobta sheekooyinka sawirada, si aad u dejiso. Sii wad akhriska oo waxaad kala soo bixi kartaa sawirradan tayada sare leh bilaash.
Xidhmada 'Calligraphic Vector Pack'
Waxaan haynaa nooc .jpg ah (vector madow oo ku yaal asalka cad) iyo nooca .svg, qaab vector ah oo culeyskiisu aad uga yaryahay .ai ama .eps. Waad ku furi kartaa .svg Adobe Illustrator iyo, haddii aad wali doorbideyso inaad ku shubto qaababka ugu caansan, waad ku xallin kartaa adigoo tagaya Faylka> Badbaadinta sida (halkaasna waxaad ku dooraneysaa qaabka adiga kugu habboon).
Laakiin waa inaadan iska indhatirin weynida kartida faylasha .svg, hadda HTML5 waa lambarka boqorka. SVG macnaheedu maahan wax aan ka aheyn Scalable Vector Graphics: haa, waxay loola jeedaa waxaad ka fakaraysid. Sawir isku mid ah ayaa na siin kara cabirro kala duwan inta lagu jiro degelkeenna, adigoon luminayn iota tayada, kaliya adoo ku qeexaya lambarka. Oo ma ogtahay waxa ugu fiican weli? Waa kuwee xawaare ka dheereeya sawirka caadiga ah.
Waxa dhacaya ayaa ah in suuragalnimada qaabkani ay wali bilaabmayso in la aqoonsado, xilligan la joogona ma ahan nooc feyl ah oo la akhrin karo, tusaale ahaan, nidaamka biraawsarka Android (iyo daalacayaasha kale ee webka oo aan la cusbooneysiinin nooca ugu dambeeya) ). Laakiin shaki iigama jiro in, waqti yar gudahood, ay sahli doonaan in sawirada noocyadan ah lagu soo daro bogaggayada.
Dhanka kale, xusuusnow tan iyo tan Freepik Waxay kuu sameeyeen xirmooyin 100 takhasus gaar ah kuu ah, akhristaha Creativos Online. Sababtoo ah na soo socda ayaa leh abaalmarin. Halkan ka degso.
100ka vector ee baakadka ay Freepik na siiso
Xigasho - Freepik
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » 100 Dulucda Wicitaanka Wanaagsan ee Bilaashka ah
Wanaagsan! Mahad badan!